EyeTrackShop: Nyochaa Anya site na Web Cam | Martech Zone
EyeTrackShop: Nyochaa anya site na Web Cam
Nke a bụ nnukwu ọganihu na ụlọ ọrụ nsuso anya. Ọ dịbu na mgbe ịchọrọ ịchụso anya gị, ị ga-akwụrịrị ego ndị ahụ na ụlọ ọrụ ndị ahụ akụrụngwa na ndị ọrụ iji mezuo ọrụ ahụ.
Gini bu nlekota anya?
Anya nsuso teknụzụ na-eme kpọmkwem ebe ndị ahịa gị dị. Nke a na - enyere gị aka ịhụ ozugbo ma nkwukọrịta gị ọ na - arụ ọrụ. N'oge gara aga, ị ga-atụkwasị obi n'echiche gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ ọmụmụ larịị dị elu nke were ogologo oge, mana ugbu a, anyị emeela nyocha anya na ụzọ ọhụrụ, dị mfe, ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ahịa. EyeTrackShop
A na-ewepụta nsonaazụ EyeTrackShop na akụkọ ahaziri ahazi, gụnyere oge ọ were onye na-ekiri ya iji dozie ihe ahụ, ogologo oge ha nọrọ na ihe ahụ, yana usoro okpomọkụ nke ebe ha lebara anya ha. Nlekọta anya bụ teknụzụ bara uru maka ị nweta peeji ọdịda na mgbasa ozi - na-eme ka elebara onye na-ekiri anya anya ebe ọ bụla ịchọrọ. Enweela ike ịnwale ule kwa ụbọchị, n'agbanyeghị ụgwọ ndị ọ gụnyere.
Enwere uru dị na nke a maka ụlọ ọrụ abụọ na ndị mgbasa ozi:
EyeTrackShop's pụrụ iche nsuso anya uzu maka webcams na-enye gị ohere ịme nyocha n'ọtụtụ ahịa n'otu oge.
EyeTrackShop nwere ike nwalee megide ogwe osisi buru ibu na-akparaghị ókè.
A na-eme nyocha EyeTrackShop n'ụlọ, nsonaazụ ya dabara na iji okike.
EyeTrackShop nwere ike nweta nsonaazụ n'ime ụbọchị ole na ole.
EyeTrackShop na - akwụ ụgwọ - ọnụ ahịa ego ga - enyere gị aka ịbawanye ROI gị, ọbụlagodi maka obere ọrụ.
Tags: umu nwokegeo-ọnọdụihe a klout akara
Na-enweghị Right Ngwaọrụ…
Mee 11, 2011 na 7: 14 PM
Amamiihe. Eyetrackshop ga-enyere ụlọ ọrụ aka ịnwale nkwakọ ngwaahịa, mgbasa ozi, ibe weebụ wdg n'oge gara aga ha enweghị ike imeli ya. Nnukwu ọganihu na nyocha ahịa.